Nagarik Bazaar - महँगो स्मार्टफोन किन्नु कति उचित ?
महँगो स्मार्टफोन किन्नु कति उचित ?
फ्ल्यागसिप स्मार्टफोनमा सामान्यतया मिडरेन्जको भन्दा निकै अब्बल क्यामरा राखिएका हुन्छन् । फ्ल्यागसिप स्मार्टफोनमा राम्रो क्यामरा मात्र नभएर दुई वा तीनवटा क्यामरा पनि राखिएका हुन्छन् । र, हरेक क्यामराको आ–आफ्नै काम हुन्छ । मिडरेन्ज दुईवटा क्यामरा भएका स्मार्टफोन भेटिए पनि ती क्यामराको गुणस्तर फ्ल्यागसिपको जस्तै हुँदैन । २०१८ को सर्वोत्कृष्ट स्मार्टफोन क्यामरामा पनि सबै फ्ल्यागसिप मात्र छन् ।
फ्ल्यागसिप स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने प्रोसेसर निकै शक्तिशाली हुन्छ, नयाँ एआई ९ब्क्ष्० सम्बन्धी फिचरहरु सपोर्ट गर्छन् र गेम पनि निकै राम्रोसँग चलाउन सक्छन । तर इन्टरनेट चलाउन, सानातिना गेम खेल्न, फोन कल गर्न र विविध एप चलाउ भने अहिले मिडरेन्ज स्मार्टफोनमा उपलब्ध भएका मध्यम स्तरका प्रोसेसर नै काफी छ ।
अधिकांश मिडरेज स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा माथि उल्लेखित फिचर पाइँदैन । यो वर्गको स्मार्टफोन डिस्प्लेमा सबैभन्दा प्रचलित रेजोलुसनको १०८०पी र रिफ्रस रेट पनि ६० हर्जमै सीमित हुन्छ र डिस्प्लेमा टिएफटी ९त्ँत्०, क्ष्एक् कि त कम गुणस्तरको एमोलेड ९ब्ःइीभ्म्० प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । तापनि दैनिक कार्यका लागि मिडरेन्ज स्मार्टफोनमा हुने डिस्प्ले सेवायोग्य हुन्छ ।
२०१८ का केही उत्कृष्ट मिडरेन्ज स्मार्टफोन
१. ग्यालेक्सी जे ८
सामसङले हालै नेपाली बजारका लागि रिलिज गरेको मिडरेन्ज स्मार्टफोन हो– ग्यालेक्सी जे ८ । अहिले खुबै प्रचलनमा आएको १८ः९ अनुपातको डिस्प्ले डिजाइनमा बनाइएको यो स्मार्टफोन हेर्दा आकर्षक पनि छ । सो १८ः९ अनुपातको डिस्प्ले भने सुपर एमोलेड छ जुन पहिले सामसङले आफ्नो फ्ल्यागसिपमा मात्र राख्थ्यो । यसमा दुईवटा मेन क्यामरा राखिएको छ जसमध्ये एउटाले ब्होके इफ्फेक्टमा सहयोग पुर्याउनेछ । लन्चको बेला ३३,४९० रुपैयाँ तोकिएको यस स्मार्टफोनका विशेषता यस्ता छन्
मन नपर्न सक्ने कुरा
उच्चस्तरीय AMOLED १८:९ डिस्प्ले स्लो प्रोसेसर - Snapdragon 450
ठूलो ब्याट्री : ३५०० mAh 720p डिस्प्ले
आकर्षक डिजाइन पुरानो microUSB पोर्ट
राम्रो क्यामरा : मुख्य: Dual cameras : (16 MP, f/1.9)+ (5MP, f/1.9), LED flash
सेल्फी : 16MP, f/1.9 with LED flash
२. सायोमी मी ए२
सायोमीको निकै प्रचलित मी ए१ को नयाँ संस्करण मी ए२ ९ःष् ब्द्द० मा निकै धेरै सुधार गरिएको छ । पुरानो मोडल जस्तै यो नयाँ संस्करण पनि गुगलको एन्ड्रोइड वान प्रोग्राम अन्तर्गत पर्छ । यसर्थ यो स्मार्टफोनले निकै चाँडो सफ्टवेयर अपडेट पाउने छ । पुरानो मोडलको तुलनामा नयाँ र शक्तिशाली प्रोसेसर, निकै सुधार गरिएको क्यामरा र १८ः९ अनुपातको डिस्प्ले राखिएको छ तर हेडफोन ज्याक र मेमोरी कार्ड स्लट भने हटाइएको छ । यस स्मार्टफोनको नेपाली बजार मूल्य लगभग ३२ हजार छ ।
उच्चस्तरीय १८ः९ डिस्प्ले – १०८०पी हेडफोन ज्याक छैन
शक्तिशाली प्रोसेसर – Snapdragon 660 मेमोरी कार्ड लाग्दैन
राम्रो क्यामरा :
20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm
सेल्फी: 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm
३. नोकिया ६.१
गत वर्ष रिलिज भएर निकै चर्चा पाएको नोकिया ६ को नयाँ संस्करण हो नोकिया ६.१ । यसलाई नोकिया ६ २०१८ का नामले पनि चिनिन्छ । गत वर्षकै डिजाइनमा आधारित भएर बनाइएको नोकिया ६.१ मा नयाँ र शक्तिशाली प्रोसेसर र सुधारिएको क्यामरा राखिएको छ । नोकियाका अन्य स्मार्टफोन जस्तै यसमा पनि एन्ड्रोइड वान प्रोग्राम भएकाले भविष्यमा आउने नयाँ संस्करण चाँडै पाउनेछ । नेपाली बजारमा यस स्मार्टफोनको ४ जिबी र्याम भएको मोडलको मूल्य लगभग ३२ हजार पर्छ भने ३ जिबी र्याम भएको मोडललाई २६ हजार रुपैयाँ जति पर्छ ।
उच्चस्तरीय डिस्प्ले – १०८०पी पुरानो डिजाइन
शक्तिशाली प्रोसेसर – Snapdragon 630 एउटा मात्र मुख्य क्यामरा
16 MP, f/2.0, 27mm, 1.0µm, PDAF
सेल्फी: 8 MP, f/2.0, 1.12µm
फेसबुकका पुराना पोस्टहरू डिलिट गर्न सजिलो बन्दै !